May « 2018 « Online Tv Nepal
गगन थापालाई ओलीको जवाफ, ‘म महाराजा होईन, राजा फालेर आएको मान्छे हुँ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकृष्ण ढुंगलको कैद मिनाह नियम कानुन अनुसार नै भएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगेललाई आफूले व्यक्तिगत रुपमा नचिन्ने बताए । सँगै रहेको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई हिजो छुटेको के ढुंगेल अरे भन्दै सोधेर सम्बोधन
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको समयमा मुक्तिनाथ ‘दर्शन’ गर्न गएका थिए । उनी त्यहाँवाट फर्के पछि अहिले मुक्तिनाथमा भारतीय पर्यटकको ओइरो लागकेो छ । पर्यटन ब्यवासायी भन्छन् मुक्तिनाथमा चमत्कारीक रुपमा पर्यटकको ओइरो लागकेो छ । मुक्तिनाथ मन्दिरका मुख्य पुजारी मेशवप्रसाद सुवेदीले मुक्तिनाथले थेगी नसक्ने गरी भारतीय पर्यटकको
विदेशबाट फर्किने नेपालिले नेपालमै खरिद गरेको सुनमा पनि भन्सार लाग्ने नयाँ नियम !
काठमाडौं- सरकारले बजेटमार्फत एक सय ग्राम काँचो सुन महसुल तिरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक ऐनमा सुन मात्रै उल्लेख हुदाँ उपयोगमा रहेका गहनामा पनि भन्सार लाग्‍न सक्ने भएको छ। बिगतमा ५० ग्राम सम्म सुनका गहना सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्था थियो। काँचो सुन भने पूर्ण प्रतिबन्ध थियो। मंगलबार देखिलागू भएको
धुर्मुस-सुन्तलीमाथि लाग्यो यस्तो गम्भिर आरोप
काठमाडौं – नेपाल सरकारले शुरुवात गरेको वीर अस्पताल सरसफाइ कार्यक्रमका नाममा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ ।फाउन्डेसनको नाममा लाखौं रकम असुल गरेको आरोपसमेत लागेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ । शताब्दी इतिहास बोकेको फोहोर र प्रदुषित वीर अस्पताल सरसफाइको नाममा धुर्मुस सुन्तली पाmउन्डेसनले मनपरी ढंगले
राजाले छाडेपछि यस्तो भयो दरबारको हालत
काठमाडौँ। सरकारले तीन महिना भित्र नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा राजमुकुट सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राजसंस्थाको प्रतिकको रुपमा तत्कालीन राजाले लगाउने राजमुकुट नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा ३ महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने योजना अघि सारेका हुन्। यस अघि पनि सरकारले राजमुकुटलाई सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पटक–पटक सार्वजनिक
साउथ चलचित्रका स्टारको कति छ शैक्षिक योग्यता ? सुन्दा छक्क पर्छन सबै !
हलिउड र बलिउडमा चर्चित धेरै कलाकार छन् जसको शैक्षिक योग्यता कम रहेको देखिएको छ । त्यस्तै साउथ चलचित्रमा पनि यस्ता थुप्रै स्टारहरु छन् जसको शैक्षिक योग्यता कम रहेको छ । साउथका केही स्टारहरुको शैक्षिक योग्यता : १. धनुष सुपरस्टार रजनीकान्तको ज्वाँई समेत रहेका नायक धनुषले १० कक्षा सम्म अध्ययन गरेका
ठुलो सीसीको सवारीमा सरकारले बढायो सडक कर, बाईक देखि कार सम्मकाे कर…(हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । सरकारले ठुलो सीसी भएका बाइकको सडक कर बढाएको छ । कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा सडक दस्तुर भन्सार तिरेर भित्र्याउने गरीन्छ । त्यो कर सवारीको इन्जिन क्षमताका आधार हुन्छ । यसको वृद्धिले पनि मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । हिजो संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटले ४०१ सीसीभन्दा ठूला क्षमताका
हट अवतारमा देखा परिन् टाईगर श्राफकी बहिनी कृष्णा, गोवामा छुट्टी मनाउँदै गर्दा हद पार गरिन्
काठमाडौं । भारतीय चर्चित नायक टाईगर श्राफकी बहिनी कृष्णा श्राफ अहिले गोवामा छुट्टी मनाईरहेकी छिन् । उनले छुट्टी मनाएका केहि फोटोहरु आफ्नो इंस्टाग्राममा सेयर गरेकी छिन् । फोटोमा कृष्णालाई एकदमै बोल्ड अवतारमा देखिएको थियो । कृष्णालाई पनि बलिउडमा आउन मन भएको उनले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएकी थिईन् तर उनलाई क्यामेराको
काठमाडौं – वेष्ट इण्डिजविरुद्ध टी ट्वान्टी क्रिकेटका लागि आईसीसी ‘वर्ल्ड ११’ मा परेका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले विश्वास राखेर अघि बढ्दा सफलता मिल्दै जाने उनले बताएका छन् । हालैमात्र आईपीएल खेलेर स्वदेश फर्किएका उनले त्यसमा राम्रा खेलाडीसँग खेल्न पाएको र नयाँ अनुभव सुनाउँदै देशका लागि खेल्दा आँफु निकै उत्साहित
बुवाआमालाई भेट्न आफ्नो गाउँ जाँदै गर्दा गायक सिंहको गोली हानेर गरियो विभत्स हत्या
एजेन्सी । भारतका पञ्जावी गायक नवजोत सिंहको गोली हानेर हत्या गरिएको छ । भारतीय अनलाइन आजतकका अनुसार आइतबार राति भारतको चण्डीगढमा उनको गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएको हो । आफ्नो बुवाआमालाई भेट्न आफ्नो गाउँ बेरहामा जाँदै गर्दा उनलाई गोली हानी हत्या गरिएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । टनाको केही